पाँच सयको फलफुल किन्दा एक हजार जरीवाना ? मेयरज्यू, सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर हटाउँ ! – ebaglung.com
२०७५ जेष्ठ ३०, बुधबार १३:३४	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ जेठ ३० । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका भित्र रहेको सदरमुकाम तम्घास वजार भित्र यहाँका मेयर डिल्लीराज भुसालले ‘नो पार्कीङ्ग’ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । यस कार्यक्रमले वजारमा भई रहने सडक जाममा राम्रो सुधार देखिएका छ तर कतिपय ब्यवहारिक पक्षमा भने सम्वन्धित निकायको दृष्टी पुग्न जरुरी देखिएको छ ।
बढि मात्रमा ‘नो पार्किङ्ग’ को असर साना ब्यवसायी र सर्वसधारणलाई परेको छ भने ठुलालाई जे गरे पनि भएको छ । ठुला ब्यापारीहरुले दिनैभर आफ्नो पसल अगाडी मालबाहक ट्रकहरुमा सामानहरु लोड–अनलोड गरेर सडक जाम गरी रहेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डोरबहादुर थापा भन्छन् –‘ तिनै ठुला भनाउँदाहरुले जे गरे पनि हुने , उनिहरुले ब्यपार गरिरहने , पसल अगाडी गाडी जाम गरिरहने भएकै कारण हामीले रेसुङ्गा नगरपालिकालाई नो पार्किङ्गको अवधारणा पेश गरेका हौ, मालवाहक ट्रकहरुका लागि सीमित समय तोकिएको छ , त्यो समय बाहके हामीले देखे छाड्दैनौ, हाम्रो आँखा छलेर अझै पनि मन परी गरेको भए सुचित गर्नु होला । ’
ब्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने मेयर भुसालको घरमा जो कोही भेट्न आई रहने कुरा स्वभाविक हो । उनका घर अगाडी गाडी रोकि रहेका फोटाहरु दिनहुँ फेशवुकमा पोष्ट गरिरहेका छन् । उनैका घर नजिकै रेडियो रेसुङ्गा र रेसुङ्गा टेलिभिजन छ । यी दुई सञ्चार माध्यममा पनि मानिसहरु आई रहने, छिन मै सञ्चारकर्मीहरु भित्र पस्ने र जाने भई रहन्छ ।
यी दुई सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरु भित्र आएर क्यामरा झिकेर फर्किने वेला सम्म पनि अगाडी मोटर साईकल टेकाउन पाउँदैनन भने त्यो अब्यवारिक हुन जान्छ । यसको उदाहरण सवैका लागि हो ।
यसरी ५ सयको सर–समान किन्दा एक हजार जरीवाना तिर्नु पर्छ भने किन तम्घास बजारमा किन्ने अन्यत्रै गएर किने भई हाल्यो नि भन्ने मानसिकता सिर्जना हुदै जाँदा यहाँका ब्यवसायीहरु पलायन हुँदै जाने छन् । स्थानिय सरकार बनेपछि त्यसै त टाट पल्टी सकेका यहाँका ब्यवसायीहरु नो पार्किङ्गको अतिले ठुलो मर्कामा छन् ।